Tilmaamaha Musqusha ee Ugu Fiican Tilmaamaha Dhammaysta 2021
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Muxuu Yahay Dhamaadka Ugu Caansan ee Qasabadaha Musqusha?
Muxuu Yahay Dhamaadka Ugu Caansan ee Qasabadaha Musqusha?
2021 / 01 / 27 QoondayntaTilmaamaha qasabada 6457 0
Ka dib markaad soo xulatay qubeyskaaga, barkadda qubeyska, wax aan waxba tarayn, sagxadda dhulka, iyo midabka gidaarka, tubbada musqusha ayaa laga yaabaa inay dareemaan inay yihiin faahfaahin yar. Run ahaantii, in kastoo, waxay noqon karaan qayb naqshadaysan oo runtii isku wada xirta… ama waxay carqaladeyn karaan socodka muuqaalka ee qolka oo dhan.
Markaad u adeeganaysid qasabadaha saxda ah ee musqushaada, waxay kaa caawin kartaa inaad kubilaawdo xulashooyinka ugu caansan, gaar ahaan markay timaado dhammeystirka qasabadaha. Marka waa maxay dhammaystirka ugu caansan qasabadda musqusha, sideese ku ogtahay dhammaadka kugu habboon adiga?
Muxuu Yahay Dhamaadka Ugu Caansan Qubeyska Musqusha?
Kajawaabida su'aasha ah dhamaadka qasabada ugu caansan waa khiyaano sababtoo ah ma jirto ilo keli ah oo dabagal ku haya xogtaan. Khubarada dhammaantood waxay leeyihiin fikrado u gaar ah, dhammaystir walbana caanku sidoo kale wuu is beddelaa iyadoo lagu saleynayo isbeddellada qurxinta sidoo kale. Inbadan waxay dhahaan nikkel caday waa dhamaadka maanta kuwa ugu caansan, halka kuwa kale dhahaan waa chrome.
Ugu dambeyntiina, in kastoo, waxa ugu muhiimsan ay tahay inaad doorato dhammaadka sida ugu habboon ugu habboon baahiyahaaga iyo aragtidaada qolka. Aynu isbarbardhigno dhammeystirka ugu caansan si aan u aragno kuwa ku habboon musqushaada ugu fiican.
Ikhtiyaariyada Dhamaystiran ee Sare ee Qasnadaha Musqusha
Xulashadaada dhammaystirka qasabadda ayaa aad u kordhay tobannaankii sano ee la soo dhaafay. Kahor horraantii 2000-meeyadii, ku dhowaad suuli kasta wuxuu lahaa naxaas dhalaalaya ama isku dhejisan. Waxaan leenahay xulashooyin aad u badan maanta, laakiin taasi waxay sidoo kale la macno noqon kartaa dukaamaysigu xoogaa xoog ayuu kugu badin karaa. Ku bilow hawshaada adigoo baranaya dhammaadka ugu caansan ee aad heli doontid isla markaana tixgelineysa wanaaggooda iyo khasaarahooda.
Waxay u badan tahay inaad aragtay nikkel caday badanaa, xitaa haddii aadan garaneyn waxa loogu yeeray. Waxay leedahay midab u eg qalin oo hoosta ka ah huruud ama bunni. Waxay sidoo kale leedahay dhammaystir satin ah sidaa darteed waxay bixisaa sheen jilicsan halkii ay ka noqon lahayd milicsiga muuqda. Waa wax caadi ka ah guryaha noocyadooda kala duwan maanta, laga bilaabo rustic ilaa dhaqan ilaa casri.
Faa'iidooyinka Nickel caday
Haddii aad rabto hab fudud oo aad ku xirato musqushaada, qalabka nalushka lagu cadaydo ayaa ku habboon. Dhamaadku waa mid caan ah oo waxaad heli doontaa fursado fara badan oo qasabado ah oo la heli karo. Dhamaadka sidoo kale waa waarayaa, sidaa darteed waxay u egtahay inay sii haysato muuqaalkeeda cusub ee sanduuqa sanado badan. Waxaa intaa dheer, waxaa jira fursad yar oo qasabadaada ay bilaabi doonto inay u ekaato sanado kadib.
Qasaarooyinka Burushka Nickel
In kasta oo ku dhowaad qalab kasta oo musqusha ah oo aad rabto ayaa ku imaan doona nikkel caday, haddana waxaa muhiim ah in la aqoonsado in dhammaystirkani ku imaan karo codad yar oo kala duwan oo ka imanaya soosaarayaasha kala duwan. Tani waxay ka dhigeysaa mid khiyaano leh haddii aad rabto in qasabadahaagu ay u dhigmaan xirmada tuwaalkaaga, cadayga haysta, burushka musqusha, iyo waxyaabaha kale.
Nukliyeerka qaraabada dhow waa nikkel nijaasaysan. Guud ahaan waxay leedahay midab isku mid ah sida nikkel la caday laakiin leh wax badan oo dhalaalaya.
Faa'iidooyinka Nickel la safeeyey
Nikkel wasakhaysan waa fududahay in la nadiifiyo waxayna leedahay dhamaad waara sida nikkel la cadeeyay. Guud ahaan, dadka doonaya inay kala qaybsadaan farqiga u dhexeeya chrome iyo nikkel nijaasaysan, nikkel la safeeyey ayaa ah meesha dhexe ee ugu habboon.
Qasaarooyinka Nickel safeeyey
Matte iyo satin dhammeystirkiisu waxay noqdeen kuwa caan ah sanadihii la soo dhaafay. Natiija ahaan, dadka badankood waxay u arkaan nikkel la safeeyey inuu leeyahay muuqaal ka casriyeysan oo casri ah nickel la caday. Sidoo kale maahan wax caadi ah in la dhameeyo sida kuwa kale oo badan oo liiskan ku jira. Taas macnaheedu waxa weeye inay khiyaano leedahay in la helo oo marka aad hesho ay badanaa ka qaalisan tahay.
Chrome waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee lagu dhammeeyo agagaarka, mana aha oo keliya ereyga qurxinta guriga. Waxay leedahay midab u eg qalin oo leh dhalaal aad u dhalaalaya, dhalaal leh. Waxay ahayd dhammaystirka ugu caansan qasabadaha muddo dheer, in kasta oo ay yara yaraayeen sannadihii u dambeeyay.
Moodooyin badan oo qasabadaha ah, chrome wuxuu noqon doonaa dhammaystirka ugu kharashka badan ee la heli karo maxaa yeelay waa mid aad u baahsan oo aan qaali ahayn in la soo saaro. Halkaas, chrome waa mid aad u adkeysi badan oo xoqan u adkaysta, waxaana laga yaabaa inay tahay dhamaadka ugu fudud ee sidoo kale la helo. Tani waxay fududeyneysaa in la isku daro moodooyinka shirkadaha kala duwan.
Waa nasiib wanaag in chrome ay fududahay in la nadiifiyo sababta oo ah hoos udhaca asaasiga ah ayaa ah inay muujineyso faro iyo dhibco biyo si fudud sababtoo ah dhameystirkeeda dhalaalaya.
Matte madow wuxuu noqday dhammeystir caan ah oo leh dareen raaxo leh oo ku yaal goobo badan, laga bilaabo qurxinta guriga illaa gawaarida waxqabadka illaa elektaroniga. Dhamaadkan ayaa si gaar ah loo abuuray si uu u yeesho qaab jilicsan oo heer microscopic ah. Tani waxay u oggolaaneysaa in qaabku qabsado oo u qaybiyo nalka halkii uu ka tarjum lahaa.
Faa'iidooyinka Matte Black
Muuqaalka, muuqaalka casriga ah ayaa ah faa'iidada ugu caansan ee madow matte. Kaliya maahan inay umuuqato raaxo laakiin waa mid si gaar ah isku mid ah sidoo kale, maxaa yeelay madow wuxuu la socdaa kudhowaad midabka musqusha midabkiisa. Dhamaadkan sidoo kale waa sahlan tahay in la nadiifiyo lana ilaaliyo.
Qasaarooyinka Matte Black
Dib udhaca asaasiga ah ee madow matte waa qiimeheeda. Soo-saareyaashu way yaqaanaan sida loo baahan yahay, sidaa darteed waxay ku qaadaan qiimo jaban.
Copper waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu dambeeyay ee lagu soo kordhiyay safka dhammaadka qasabadda caanka ah, laakiin waxay dib ugu soo celinaysaa musqulaha retro ee waagii hore. Qasabadaha naxaasku waxay ku bilaabmaan liinta caadiga ah ee gubatay, muuqaalka milicsiga ee naxaas cusub. Dadka qaarkiis waxay doortaan inay ku ilaashadaan naxaaskooda qaab ilaalinaya isla muuqaalkaas, halka kuwa kale ay u daayaan naxaasku si dabiici ah illaa ay ka soo baxaan patina cagaaran oo caan ku ah seafoam.
Copper waa muuqaal gaar ah oo qurux badan, gaar ahaan guryaha leh qaababka qurxinta warshadaha ama rustic. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay faa'iidooyin shaqooyin xiiso leh sidoo kale.
Mid ka mid ah, naxaasku wuxuu awood u leeyahay inuu iskiis “u bogsado” ilaa heer, xoqitaanku marba marka ka dambeeya wuu madoobaanayaa illaa ay ka dhex milmayaan patina dabiiciga ah. Tan waxaa u dheer, naxaasku dabiici ahaan waa jeermis dilaa, sidaas darteed waa hab waxtar leh oo lagu yareeyo faafitaanka jeermiska.
Copper ma aha midka ugu cimri dherer badan ee dhammaysta qasabadda. Waxaa laga yaabaa inay “bogsooto” xoqitaannada, laakiin si aan ku habboonayn ayay u sahlan tahay in xoqitaanku uu ka dhaco meesha ugu horreysa.
Copper sidoo kale waxay noqon kartaa dayactir sare haddii aad rabto inaad dayactirto midabkeedii oranjiga ahaa ee asalka ahaa. Tan korkeeda, naxaasku waa xulasho dhif iyo naadir ah oo qasabadaha musqusha lagu xiro. Haddii aad rabto qalab iyo agab kale oo dhammaystiran oo u dhigma qasabaddaada, waxaad ku adkaan lahayd inaad soo hesho.
Naxaas la safeeyey
Naxaas la safeeyey ayaa si aan caadi ahayn caan u ahaa sannadihii 1980-maadkii iyo 1990-meeyadii. Laga soo bilaabo dhammaadkii 1990-yadii iyo horraantii 2000-meeyadii, haddana, waxaa loo arkaa inay tahay mid duugoobay. Sanadihii la soo dhaafay, si kastaba ha noqotee, waxay bilowday inay dib u soo laabato.
Iyada oo midabkeedu yahay huruud, midab dahab u eg, naxaas ayaa fudud in la arko. Gaar ahaan naxaas la safeeyey waxay leedahay dhammaystir dhalaalaya.
Faa'iidooyinka naxaas la safeeyey
Thanks to sheen dhalaalaya, naxaas la safeeyey aad bay u fududahay in la nadiifiyo, sida chrome oo kale. Had iyo jeer way waaraysaa sidoo kale, in kasta oo ay taasi ku kala duwan tahay iyadoo ku xidhan tayada qasabadda.
Qasaarooyinka naxaas la safeeyey
Soo celinta qaababkii hore waxay noqon kartaa khiyaano. Si la mid ah in khadka toosan uu u dhexeeyo "retro" iyo "taariikhaysan" moodada, waxaad u baahan tahay inaad isku xidho naxaastaada dhalaalaysa iyo qurxinta musqusha ee saxda ah si ay ugu muuqato mid casri ah oo daallan.
Naxaaska la safeeyey ayaa laga yaabaa inuu dib u soo laabto, gaar ahaan kuwa leh qaabka 'retro chic style', laakiin dadka qaarkiis waxay doorbidaan midabka naxaasta leh dhammaystir casri ah. Halkani waa meesha ay ka soo gasho naxaas satin ah. Soosaarayaasha qaar waxay ugu yeedheen burush naxaas ah, laakiin magac kasta ha ahaadee, wuxuu leeyahay midab dahab u eg oo naxaas ah oo leh in badan oo satin ah
Faa'iidooyinka Satin naxaas
Maarta Satin waxay leedahay muuqaal casri ah oo gaar ah, waxayna si fiican ugu habboon tahay guryaha ujeedkoodu yahay muuqaal heer sare ah. Sababtoo ah dhammaadku ma laha dhalaalka sare ee naxaas dhalaalaya, ma muujineyso faraha si fudud.
Qasaarooyinka naxaas Satin
In kasta oo naxaasta satin ay caan ku tahay, haddana weli kuma baahna suuqa qurxinta guriga. Tani waxay ka dhigan tahay inay adkaan doonto in la helo qalab sida muraayadda iyo baararka shukumaanka ee u dhigma tubbadaada naxaasta satin.
Bir aan xadi lahayn ayaa noqotay mid ka mid ah dhammeystirka ugu caansan dhammaan qolalka guriga, jikada ilaa musqulaha iyo wixii ka dambeeya. Waxay u egtahay nikkel la caday, laakiin birta birta ah waxay leedahay hoosaad buluug ah halka hoosta hoose ee nickelna ay tahay jaalle ama bunni badan. Weli, birta aan xarka lahayn waxay si fiican ugu habboonaan kartaa ku dhowaad nooc kasta oo musqusha ah.
Sababtoo ah birta birta ah waa mid caan ah, waxaad uheli doontaa waqti sahlan helitaanka agab isku mid ah iyo qalabka musqusha si aad u abuurto muuqaal isku mid ah.
Qasaarooyinka ahama Steel
Bir aan xadi lahayn ayaa laga yaabaa inay caan tahay, laakiin ma ahan mid ku habboon. Si fudud ayey u xoqdaa. Sidoo kale way adkaan kartaa in nadaafadda la ilaaliyo maxaa yeelay kaliya ma muujineyso faraha faraha si deg deg ah laakiin waxay u baahan tahay in lagu nadiifiyo nadiifiyayaal gaar ah laguna tirtiro hadhuudhka birta.
Naxaas saliid-saliideysan ayaa kobcayay tobankii sano ee la soo dhaafay ama wixii la mid ah tubooyinka musqusha iyo kuwa jikada si isku mid ah. Dhamaadku wuxuu umuuqdaa mid madow oo madow ama ku dhowaad madow, laakiin leh codad naxaas ah oo dhalaalaya. Guud ahaan waxay leedahay dhammeystir u eg satin, waana hodan aad u caan ah guryaha iyo dhaqanka, iyo sidoo kale guryaha leh bilicsanaanta Tuscan.
Faa'iidooyinka Naxaas Saliideed
Waad ku mahadsan tahay caannimadeeda sii kordheysa, naxaas saliideed ayaa hadda la heli karaa meel kasta oo aad eegto. Tani waxay ku siinaysaa fursado badan oo qasabado aad ka kala doorato. Intaa waxaa dheer, dhammaystirka matte-ka oo kale ma tusayo dhibco biyo si fudud.
Qasaarooyinka Naxaas Saliid-La Mariyay
Si la yaab leh maahan, maadaama caannimada naxaas ee saliidda duubtay ay sare u kacday, sidaas oo kale qiimaheeda ayaa sare u kacay. Waxay u egtahay inay ka mid tahay xulashooyinka ugu qaalisan ee qasabadaha, marka hubi inaad miisaaniyad u sameyso.
Nadiifinta Nadiifinta Noocyada Kala Duwan ee Dhamaadka
Waxaan soo xusnay in qaar ka mid ah dhamaysta qasabadu ay ka sahlan tahay nadiifinta kuwa kale. In kasta oo badankood ay fududdahay in la nadiifiyo, haddana waxaa jira tixgelinno muhiim ah oo maskaxda lagu hayo maaddaama aad wax u iibsanayso qasabadaha oo aad baranayso sida loo daryeelo kulamadaaga cusub.
Ka taxaddar Waxsoosaarka iyo Buuxinta Wakiilada
Waxs iyo wakiilada buuxinta waxay ku shaqeeyaan iyagoo buuxinaya cilladaha dusha sare ee dhammeynta qaarkood, iyaga oo siinaya dhalaal dhalaalaya. In kasta oo alaabooyinka ay ka kooban yihiin maaddooyinkani ay ku habboon yihiin dhammaystirka hufnaanta, hubi inaadan u isticmaalin dhammaystirka maaddada ama satin-ka oo kale. Dhammeystirradan ayaa si sax ah loo sifeeyay si loo abuuro la'aanta dhalaalaya iftiinka, iyo alaabooyinkani waxay ku dari doonaan dhalaal aan loo baahnayn iyaga oo buuxinaya qaababkaas, badanaa qaab aan dheellitirnayn ama jilicsan.
Nadiifi Waxkasta oo qasabad ah
Gaar ahaan haddii aad carruur leedahay, lama sheegayo noocyada maaddooyinka iyo walxaha ay ku dhici karaan qasabadahaaga. Noocyada qaar ka mid ah maaddooyinka, gaar ahaan kuwa aysiidhka ahi ku jiraan, ayaa wakhtigu kaa dhammaanayaa markay dhammaadaan. Si looga hortago waxyeeladan, tirtir qasabadaada badanaa, xitaa haddii aad kaliya isticmaasho biyo iyo maro qalajinta.
Nadiifi Nadiifiyeyaasha Nadiifka ah
Waa sharci fiican suulka si looga fogaado nadiifiyeyaasha xoqan, oo ay ku jiraan burushyada iyo isbuunyada xunxun, wixii qasabad ah oo dhammeeya si aanad khatar ugu gelin inaad xoqdo. Si kastaba ha noqotee, tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dhammaystirka nikkel. Nickel si fudud ayuu u wasakheyn karaa ama miridh gareyn karaa haddii la xoqo, xitaa haddii xoqitaanku ay aad u yar yihiin oo aadan arkin. Si aad uga fogaato halistaan, ka doorbid maro microfiber-ka.
Iskusoo wada duuboo, Adeegso Tilmaamaha Daryeelka Soo-saareyaasha
In kasta oo ay jiraan tilmaamo guud oo ku saabsan dhammeystirka qaarkood, sida ka-hortagga xoqidda nikkel iyo ka-fogaanshaha wax-soo-saarista dhammaystirka maaddada, waxaa jira hal sharci oo dahabi ah: raac tilmaamaha daryeelka soo saaraha qasabadda.
Soosaarayaasha kaladuwan waxay qaabayn karaan ama u wada codsan karaan isla dhammeyn siyaabo kala duwan ah, sidaa darteed alaabooyinka u shaqeeya midkood ayaa dhaawici kara mid kale. Intaas waxaa sii dheer, haddii aadan raacin tilmaamaha daryeelka soo-saaraha, waxay tirtiri kartaa damaanadda qasabaddaada.
Doorashada Qarsoon ee Qolka Musqusha Dhameyso
Ugu dambeyntiina, xulashadaada dhammeystirka ah ee tubbada musqusha ayaa u soo degaysa qaabkaaga shaqsiyeed iyadoo ay weheliso miisaamidda faa'iidooyinka iyo qasaaraha. Isbarbar dhig xulashooyinkaaga iyo hagaha kore waxaadna kufiicnaan doontaa wadada aad ugu raaxeysaneyso qasabadaha qumman ee musqushaada. Tilmaamo dheeraad ah inta aad wax iibsaneysid, ka fiiri tilmaamaha iibsiga qasabada musqusha.
3 Hole 4 Inch Centerset Tuubada Burushka Nickel
Matte Black Laba-Qabsi Fidsan Qasabada Musqusha
Qubeyska Musqusha ee Chrome oo leh Golaha Bullaacadda
Hore:: Qaab dhismeedka iyo soosaarida qasabada madow Next: Sida loo Nadiifiyo Qalabka Matxafka Musqusha ee Matta